हालै, रूस मा किशोर व्यवस्था, छोराछोरीको सुरक्षा छैन अपमान गर्न शुरू छन् भनेर समुदायमा हल्ला धेरै। र त्यो जीवन र नाबालिग को स्वास्थ्य छुन्छ। गरेको विदेशी शब्द "किशोर" कसरी decipher गर्न बुझ्न गरौं, यो नवीनता देश लागि उपयोगी छ वा यसको क्षरण नेतृत्व। यसबारे एकदम गाह्रो छ। रूसी समाज मा साना पुस्ता गर्न परंपरागत प्रकारको। उदाहरणका लागि, आर्थिक नवीनता र राजनीतिक प्रणालीको लागि मान्छे, छोराछोरीको शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न त ग्रस्त तयार हुनुहुन्छ भने, यो शंकास्पद छ।
एक "किशोर" के हो?
यो शब्द कुनै पनि संग्रह मा, सर्तहरू अर्थ expound छ। कुनै विशेष व्याख्या दिइएको छ छन्। शब्द ल्याटिन juvenalis, «जुनियर» बाट अनुवाद derives। किशोर - अपरिपक्व छ। यसलाई हामी एक physiologically गर्भ धारण गर्न असमर्थ भएका बच्चाहरु बारेमा कुरा गर्दै छन् भनेर स्पष्ट छ।
मनोवैज्ञानिक अपरिपक्व व्यक्ति अन्त सम्म गठन गर्न एक व्यक्ति, यो सही दिशा मा प्रभावित, परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर तर्क। को Forefront मा किशोर न्यायको "छोराछोरीको अधिकार" बुझाइएको। उद्धरण, किनभने अवधारणा छ hypertrophied लगभग पहिचान परे।
एक पश्चिमी नवीनता - यो कि शब्द "किशोर" उल्लेख गर्नुपर्छ। समाज मा यसको परिचय को इतिहास दशकहरूमा फिर्ता जान्छ। पछिल्लो शताब्दीमा, सबै देशहरूमा किशोर delinquency सामना गर्दै हुनुहुन्छ। यो घटना युरोप, को सोभियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूमा युद्ध र आर्थिक गिरावट को एकदम प्राकृतिक नतिजा थियो। हामी विभिन्न तरिकामा यसलाई हल। को रूसीहरूले देशमा परिवारमा शिक्षा को प्राथमिकता खातामा लिएर हरेक भाग्य सामना गर्ने एक विशेष सार्वजनिक शरीर संगठित।
अर्को कुरा - संसारको पूंजीपति देशहरूमा जहाँ पैसा प्राण भन्दा बढी महत्वपूर्ण छ। बरु, किन आमाबाबुले पश्चिम मा छोराछोरीको शिक्षा, लागि अवस्था सिर्जना छैन बुझ्न, प्रत्येक slightest दोष लागि दण्ड को एक प्रणाली शुरू। अहिले किनभने अपार्टमेन्ट मा फर्श साफ छैन वा खिलौने छरिएका छन्, बच्चा टिप्न सक्छ। प्रणाली सबै बच्चाहरु हुन सक्छ कि सिद्धान्त विकसित भएको थियो। अहिले यो विचार यो सिद्धान्त मा hypertrophied छ: बच्चा सजाय को ठेस लागि - आफ्नो अधिकार उल्लङ्घन हो। किशोर व्यवस्था परिवार गलत अर्थ, कुल प्राथमिकता बच्चाहरु को "अधिकार" को कोण को विचार पनि समावेश छ। एक बच्चा रो छ भने - परिवार र जस्तै टाढा लिन - आमाबाबुले दोषी, आहत छन्। यो राज्य प्रणाली खडा जो आमा र पिताजी आफ्नो सन्तान को दास हो भन्ने तथ्यलाई, को "छडी" गर्न आउँछ। यस्तो प्रणाली, को पाठ्यक्रम, अभिभावकको प्रेम अन्तर्गत संचालित छ।
एक लोकतान्त्रिक समाज कडा यसको लिखित नियम छ। नियममा कुनै पनि मामला मा उल्लङ्घन हुन जब नागरिक अवस्थाको मा राज्य राखे। व्यवस्था देखि slightest विचलन को तत्काल सजाय खींचती। तर, नागरिक को साधारण उल्लंघन आफ्नो अधिकार को सुरक्षा अदालत मा, धेरै फरक कुराहरू किशोर सिस्टम को कार्यान्वयन मा खोज्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि। यदि यसलाई बच्चा को अधिकार को उल्लङ्घनको अवस्थामा खोज्न, विशेष शरीर हुन्छन्। तिनीहरूले छोराछोरीलाई आमाबाबुले आफ्नो whereabouts रिपोर्ट बिना कहीं हटाइएका छन्, कि छ, चाँडै र बन्द कार्य। दिन भित्र, यसबारे इनडोर अदालत जान्छ। यो शरीर को निर्णय पनि चाँडै लिइएको छ। बाल सधैंभरि या त पार्टी द्वारा यस्तो कार्य विरुद्ध अपील को संभावना बिना परिवार हटाइयो। राज्य यसलाई फिर्ता गर्न धेरै गाह्रो छ, आफ्नो हेरविचार अन्तर्गत बच्चा लाग्छ।
रूस मा किशोर व्यवस्था
लगभग पूर्व सोभियत संघ को सम्पूर्ण क्षेत्र, हाल सम्म, नाबालिग को अधिकार सामना पनि पुरानो शरीर काम जारी राखे। आफ्नो यसरी सम्झन्छन् सिद्धान्त, परिवार पालनपोषण को प्राथमिकता। तर लोकतान्त्रिक परिवर्तन र समाज को लागि यो संवेदनशील क्षेत्र आए। पश्चिम विशेषज्ञ स्तरमा, कुनै प्रणाली किशोर रूपमा, बस रूपमा बच्चाहरु को लागि उपयोगी र कुशल हुन सक्छ कि जोर। रूस आफ्नै देशमा यसको सिद्धान्त परिचय निर्णय गरेको छ। किन हाम्रो समाज व्यवस्था मा, राष्ट्रिय परम्परा गर्न बिल्कुल विपरीत, केवल एक विस्तृत थिएन। बलियो र शक्तिशाली राज्य को मुख्य घटक छ - ठूलो रूसी मा मटर राजा को दिन देखि यो परिवार भनेर विश्वास थियो। यो पनि समाज को "सेल" भनिन्छ। परिवारमा, छोराछोरी सामान्य जीवन कौशल सिक्न, मान्छे र जस्तै को परम्परा अवशोषित।
विरोधीहरूले र किशोर सिस्टम को आलोचकहरु
यो शिक्षा मा वर्णन दृष्टिकोण नागरिकहरु बीच गम्भीर अशान्ति कारण छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। वर्तमानमा, किशोर न्याय मा व्यवस्था पहिले नै रूस मा अपनाए गरिएको छ। यो कागजात भनिन्छ: "रूसी संघ मा नागरिकहरु लागि सामाजिक सेवाहरूको आधारमा।" अलार्म Bells एक बज अलार्म घण्टी भएका छन्। यस किशोर सिस्टम को प्रशासन समाज र अधिकारीहरु बीच एक विशाल दरार सिर्जना भन्ने तथ्यलाई। सबै को पहिलो यो किशोर न्याय प्रणाली को निर्णय बनाउने शरीर को बन्द प्रकृति संग जोडिएको छ। राज्य हामी परंपरागत यसको एकमात्र विवेकमा आफ्नै नागरिक निर्णय छ, परिवारको मामिलामा हस्तक्षेप। कसरी कुन विधि सहित सन्तान हुर्काउन एक निर्णय गर्ने र उनीहरूले एउटा दाँया (हुनत यो व्यवस्थामा enshrined छैन) छ।
तर यो समस्या केवल पहिलो पत्र हो
मुख्य दरार अक्ष को अधिकारीहरु नागरिक भरोसा हुनेछ। किशोर को सिद्धान्त अनुसार, राज्य छोराछोरी आफूलाई हेरविचार लाग्छ। र तपाईंले स्वेच्छाले अपरिचित आफ्नो प्रिय बच्चा हरेस गर्नेहरूलाई थाहा? समाज खुल्लमखुल्ला र candidly वर्तमान सरकारको अविश्वास व्यक्त यस्तो कानून को initiators आशा छ। यो, स्पष्ट, नवीन आविष्कारहरु खोजिरहेका के रूस र यसको नागरिक हितमा नष्ट गर्न खोजिरहेको छ। हाम्रो समाजमा "किशोर", खातामा पश्चिमी देशहरूको अभ्यासहरू लिएर अवधारणा अन्य निष्कर्ष, अहिलेसम्म देखिने छ।
अमेरिकी राज्य को संगठन (OAS)
समय-बोनस भुक्तानी - यो छ ... वेतन: remuneration को प्रकारका
नवजात शिशुहरु खाम र हुड लागि बुनाई
HashOcean: समीक्षा। क्लाउड खनन
Veronica Lysakova: जीवनी, सेलिब्रिटी जीवन र भविष्यको लागि योजना
मली। गायक र उनको काम
मलम vishnevskogo: आवेदन र अद्वितीय गुण
Dandelions संग मैनीक्योर - वसन्त को आफ्नो हात भावना दिन!